Sheeko walba oo aad uga baahantahay Anderlecht v Manchester United kulanka Europa League
Wednesday, December 12th, 2018 - 11:15:13
Thursday April 13, 2017 - 10:31:56 in Wararka by Muuse Cabdi
Anderlecht ayaa badisay 5 ka mid ah 6dii kulan ee ugu dambeysay ee ay ciyaaraha Europe ku ciyaarto Gurigeeda, waxayna soo dhoweyn doonaan Manchester United lugta hore ee wareegga 8da.
Anderlecht ayaa waxay khasaarooyinkii ugu xumaa si joogto ah Europe oo dhan ka qaadatay Manchester United, waana markeedii ugu horreeyay ee ay sideedda timaad 20 sano, waxayna iska eegi doonaan wajihidda Zlatan Ibrahimović.
Mourinho ayaa rajeynaya in uu safkiisa kusoo laabto Antonio Valencia markii laga soo tegay kulankii Wearside.
United ayaa noqon doonta mar kale la’aanta goolhaye David de Gea, oo weli soo kabasho dhaawac ku jira.
Mourinho ayaase sheegaya in uu la dhacsanyahay daacadnimada Sergio Romero oo uu waxqabad weyn ka filayo kulanka Europa League, Argentina laacibkan u dhashay ayaa qaadan kara booska De Gea oo la filayo in uu soo laabto kulanka Chelsea ee Toddobaadka dambe.
Dhaawacyada ayaa la macno ah in Marcos Rojo iyo Eric Bailly ay sii joogi doonaan difaaca dhexe ee United.
United ayaa heli doonta adeegga 28-gool laacibka dhaliyay ee Zlatan Ibrahimovic, oo 35-jir ah, waxaana uu cashar kasoo dhigi karaa Constant Vanden Stock stadium.
Sweden wiilka u dhashay ayaa dhaliyay goolka furitaanka ee kulankii Sunderland wuxuuna dhammeystay 90-ka daqiiqo.
Anderlecht laacibka u dhaliyay 28-gool ee Lukasz Teodorczyk ayaa dhaawac garabka ah ku seegaya kulanka.
Kulamadii isugu dambeeyay labada kooxood
• Kani waa kulankii 7aad ee labada naadi ay wada qaataan; Anderlecht ayaa 2 gurigeeda ka dhacday badisay 6-da kulan ee horay loo ciyaaray (Badisay 2 Khasaartay1 gurigeeda – Khasaartay 3 kulan oo ka dhacay Manchester).
• Kulankii u horreeyay ee 3daas kulan – wuxuu ku dhammaaday 10-0 European Cup ay ku badisay United ciyaartaas oo ka dhacday garoonkii hore ee Manchester City, Maine Road, markii ay aheyd 26 September 1956 – waxay baaqi kusii tahay Anderlecht in ay aheyd khasaaraheedii ugu weynaa abid, United-na guusheedii ugu weyneed, ee UEFA tartan u diiwaan gashan.
• Anderlecht ayaa la ciyaartay kooxaha ka socda England 32 mar ciyaaraha UEFA Badisay 7 Garab dhacday 5 Khasaartay 20 (Badisay 7 Garab dhacday 3 Khasaartay 7 kulamada ka dhacay Brussels ah). Weli kuma aysan soo badin 15 safar oo ay u gashay dalka England (Garab dhac 2 Khasaare 13). Markii u dambeysay ee ay la ciyaaraan koox England ka socota waxay aheyd Sanadkii hore, UEFA Europa League guruubkiisa ayeyna khasaare 2-1 ah ugala kulantay Tottenham Hotspur waxayna ku badisay natiijo taas la mid ah kulankii gurigeeda.
• Anderlecht kulamada tegay ee ay la ciyaartay kooxaha England waxaa ka mid ah 2 final: Mid waxaa ay ku badisay 4-2 waxayna la qaadatay West Ham sanadkii 1976 European Cup Winners' Cup, oo lagu ciyaaray Brussels, waxayna laba lug la ciyaartay 1984 UEFA Cup final agkooxda Tottenham, waxaana looga badiyay 4-3 rigooreyaal ah markii labada kulan garab dhac min 1-1 ah la galay.
• Kooxda lixda mar la ciyaartay Anderlecht ee United ayaa waxay leedahay waaya Aragnimo ku filan marka la joogo Belgian waxayna 7-1 isu geyn ah uga soo badisay Club Brugge 2015/16 UEFA Champions League is reereebkiisa.
• Ibrahimović iyo Anderlecht wiilkeeda Isaac Kiese Thelin waa 2 ka mid ah ah 3da Swedish ee hantay koobab horyaallo ah, dhammaantood ula jeedkoodu waa in ay qaadaan UEFA Europa League. Celta Vigo wiilkeeda John Guidetti ayaana ah ninka 3aad.
• United laacibkeeda una dhashay Belgian ee Marouane Fellaini ayaa wajahay Anderlecht 4 mar isagoo u dheelaya Standard Liège wuxuuna ka heystaa rikoor ah guul1 Garab dhac 2 Khasaare 1.
• Lugta hore ayaa dhici doonta maalinta ay tahay dhalashada laacibka United ee Eric Bailly oo 23-jirsanaya.
• United ayaa ciyaartay kulamo ka yar marka la fiiriyo ciyaaraha UEFA kooxda Anderlecht oo dheeshay (336 xilli kooxaha Belgian ay ciyaareen 388) balse wey ka guulo badantahay: 178-173.
Safafka labada dhinac.
Safka Anderlecht 4-3-3: Ruben, Emmanuel Adjei, Kara Mbodji, Uros Spajic, Ivan Obradovic, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Nicolae Stanciu, Alexandru Chipciu, Lukasz Teodorczyk, Sofiane Hanni
Safka Man Utd 4-2-3-1: Sergio Romero, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Eric Bailly, Luke Shaw, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Henrik Mkhitaryan, Paul Pogba, Marcus Rashford, Zlatan Ibrahimovic